Odeessaalee gaggabaaboo Onkololeessa 3,2018 - BBC News Afaan Oromoo
Foon booyyee fi foon mala saayinsawan siliindarii keessatti qophaa'uu kaansarii harmaaf nama saaxiluu danda'aa jedha qorannoon dhiyeenya dhaabbata fayyaa bu'uurefachuun bahe. Dubartooti foon mala saayinsawaan oomishaman ssoratan carraa kaansariin qabamuusaani haraka sagaliin dabala jedha. Ogeessooti gama biraan jiran immoo bu'aa qorannoonwwan akkasii qalbiidhaan ilaaluun barbaachisa jedhu.
Liigiin dubartootaa paartii bulchaa Afrikaa Kibbaa dhiiroti dubartoota gudeeduun yakkaman qaamni saalaa teestkiliii irraa muramuu qabaa jedhan. Afrikaan Kibba biyya addunyaarraa gudeeddiin dubartoota baay'een keessatti mul'atu ta'uu gaazexaan biyyattii gabaaseera.
Dhadachi haqaa addunyaa Ameerikaan qoqqobbii Iraanirra keesse akka laaffistu ajaje. Nyaatifi qorichi gargaarsa namoomaaf ergamu biyyattii akka galu hayyamamuu qabu jedheera. Ameerikaan walgaltee niiwkilaaraa diiguun bara darbe ture Iraanirra qoqqobbii kan keesse.
Awustiraaliyaan gibira oomishaalee qulqulina laguuf kaffalamu kaaste. Oomishaaleen kunneen miiyoota bu'uuraa hin taane keessa waan ramadamaniif gibira harka 10 tu irraa kutama ture. Dubartoonni biyyattii kondomiifaa irrallee hin jiru jechuun mootummaa biyyattii gibira hambisuuf kan dhiibbaa gochaa turan.
Waa'ee laguu dubbachuun safuudha?
Riipbiliika Diimookiraatawaa Koongoo
Diimokiraatik Riipblik of Koongootti ogeessotni fayyaa afur dhukkuba Iboolaa irratti hojjetan jiraattotaan haleelaman. Jiraattonni magaalaa Buteemboo ogeessota fayyaa kunneen haleelan dhukkubni Iboolaa jedhamu hin jiru jedhanii waan amananiifi. Biyyattii erga Iboolaan dhalatee namooti 100 caalan du'aniiru.
Marii hatattamaa fayyaa bababl'achuu Iboolaa irratti
Dubartiin Saawudi Arabiyaa nama meeshaa muuziqaa taphatutti akka hin heerumneef dhorkamte. Dubartiin nama jaalattutti heerumuuf mana murtiitti yoo falmiteyyuu eesumnishee muziqaan kuni amantee keenyaan ala jechuun mormeera. Manni murtichis yaaduma kana deeggaruun heerumashee hamabiseera.
Balaa xiyyaaraa magaalaa guddoo Sudaan Kaartumitti mudateen buufati xiyyaaraa biyyattii hojii dhaabera. Balichi xiyyaarota waraanaa lama gidduutti lafa xiyyaarrii qubatutti dha kan qaqqabe. Balichaan namooti saddeet miidhamaniiru, balali'nsi idila addunyaas gara buufata xiyyaaraa biraa port sudan jedhamutti geeddarameera.
Pireezidantiin Sudaan Kaabinee isaanii diigan
Taatuun beekamtuu Chaayinaa Faan Biingbiing gibira hin kaffalle jedhamuun doolaara miiliyoona 129 adabamte. Taatuun kun hiriyootashee miidiyaa hawaasummaa dhiifama gaafachuun waxabajjii darbe qabee as baatee hin bane ture. Qarshii adabamte yoo yeroodhaan deebistee himannaan ishee ni hafa kan jedhe Xinua dha.
Riipbiliikii Dimookiraatawaa Koongootti Iboolaan dhalate, Dhaabbatni Fayyaa Addunyaa marii hatattamaa irra jira
Waa'ee Wal'aansa fayyaa Masirii durii kana beektuu?
'Jajaja, 55555, kkkkk': Afaan birootiin akkamiin kolfama?